Haddii aad akhriday badan oo wadahadalo la xiriira oo weli waxba ka soo shaqeeyay si aad u noola files Xvid, waxaad yeelan doontaa faraxsanahay xalka ku qoran qodobkan. Codsiga fudud oo wax ku ool ah halkan la wadaago gabi ahaanba ha kartaa in aad ku dhameysan aad mashruuc aad u fiican u. Hubi in siyaabo kale noola video files sida MP4 halkan.
Taasi Wondershare Video Editor ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ), oo ah qalab video abuurka caaqil. Waa in la files XviD encoded (tusaale ahaan, Xvid in AVI) si aad u wanaagsan u shaqayn karto. Just si xor ah u jiidi laydi resizable in ay doortaan mid ka mid ah meelaha video Xvid ah, si aad noola qataarrada madow ee faylka ama ku haboon qalab yar-screen, ama kaliya diirada saaraan meelaha qaarkood aad rabto. Hoos waxaa ku tutorial ah tallaabo-tallaabo in ay ku tusaan sida loo noola files Xvid aan u reencoding.
1 Import Xvid videos in Cropper Xvid this
Double guji this app ee miiska icon si ay u abuurtaan. Dooro "16: 9 Widescreen" ama "4: 3 Standard" ikhtiyaar in ay galaan ay interface ugu weyn. Next, dajiyaan doonayay files Xvid aad kombiyuutar si ay Cropper Xvid this. Si aad u samayn, riix "Import" ikhtiyaarka in dhinaca kore ee bidix ee interface in ay caleenta iyo shuban aad videos Xvid deegaanka ama jiita iyo hoos u files bartilmaameedka ka gal in app this. Ka dib markii in, jiidi mid ka mid ah Xvid videos ka app ee album in ay Timeline ah.
2 Dalag files Xvid
Double guji file Xvid ku Timeline ka dibna riix "Dalag" badhanka hoose ee guddiga video tafatir ah, ama aad kaliya xaq guji file ka dibna dooran "Dalag" doorasho ka submenu ah.
Ma u aragtaa leydi ciyareedka suuqa kala Falanqeynta tagay? Ka dib marka aad riix "Play" button, aad jiidi karaan oo ka guurto mid ka mid dhinac kasta oo afargees tuuri in ay doortaan video meel kasta oo uu doono. Waxaad arkaysaa saamayn-waqtiga dhabta ah ee uu suuqa kala Falanqeynta xaq karo. Haddii aadan ka dhergin saamaynta, kaliya shaqada sameeyo mar kale. Haddii aad ku qanacsan tahay, riix "Ok" si loo badbaadiyo goobta. Waxa si fudud oo ku habboon in video dalagga, soo maaha?
3 Save the files cusub
Ugu dambeyntii, kaliya riix "Abuur" button inay u dhoofiyaan file cusub Xvid. Daaqadda pop-up ka, tag "Qaabka" category iyo doortaan AVI sida qaab wax soo saarka. Markaas in goobaha Advanced hoose, sax Xvid sida ay encoder. Ogsoonow in XviD, sida nooca file ah, dhab ahaantii waa file AVI la XviD encoded.
> Resource > Video > Xvid Cropper: Sida loo Dallaga Xvid Files